“___ ထီး ___” | AnZarTone
by AnZarTone “___ ထီး ___”
ထီးကို ယောက်ျားဆောင်း အဖြစ် ပုံသွင်းခဲ့သူ Jonas Hanway (1712-86)
မြန်မာလို “ထီး” …။
အင်းဂလိ လို “Umbrella” ….။
(မှတ်ချက် ။ ။ ကာရန် မလိုက်ရ။)
မြန်မာမှု မှာတော့ဖြင့် “ထီး” ကို ဒီလို ဖွင့်ဆိုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ထီးသည် နေပူသည့်အခါ အပူမှကာကွယ်ရန်၊ မိုးရွာသည့်အခါ စွတ်စိုခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်၊ ဦးခေါင်းထက်တွင် အုပ်မိုးရသော လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။
Source : http://my.wikipedia.org/wiki/ထီး
အင်္ဂလိပ်လို “Umbrella” ဆိုတဲ့ စကားကတော့ ဒီလို ရှိပါတယ်။
Umbrella (ထီး) ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဘယ်ကနေ ဆင်းသက်လာသလဲ ဆိုရင် “Umbra” ဆိုတဲ့ လက်တင် စကားက ဆင်းသက်လာတဲ့ စကားပဲ ဖြစ်တယ်။ “Umbra” ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကတော့ Shade or Shadow ဖြစ်ပါတယ်။ “အရိပ်” လို့ ပြောလို့ ရမယ်ပေါ့နော့။ ဒီတော့ အရင်းစစ်လိုက်ရင် “ထီး” ဆိုတာ “အရိပ်” လို့ ပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
“ထီး” ကို နောက်ထပ် ခေါ်တဲ့ အမည်တွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ … parasol,abrolly, parapluie, rainshade, sunshade, gamp, bumbershoot, umbrolly တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထီး တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် (၄၀၀၀) လောက်က စပြီး တီထွင် ခဲ့ကြပါတယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နေပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက်ပါပဲ။ “ထီး” ကို မိုးဒဏ် ကာကွယ်ဖို့ အတွက် စတင် အသုံးပြုခဲ့တာကတော့ တရုတ်လူမျိုးများပါပဲ။
၁၆ ရာစုမှာ “ထီး” ဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ စတင်ပြီး အသုံးများလာခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဥရောပ တောင်ပိုင်းမှာ ပိုပြီး အသုံးများ ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက “ထီး” ကို အမျိုးသမီးတွေ အလှဆင်ယင်ရာမှာ (ကြွားတဲ့နေရာမှာ) အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်း တစ်ခု အဖြစ်သာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ “ထီး” ဆို အမျိုးသမီးသုံး ပစ္စည်းလို့ပဲ ယူဆခဲ့ကြတယ်လို့ ပြောလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ပါရှား ခရီးသွား စာရေးဆရာ Jonas Hanway (1712-86) ဟာ ဥရောပ တောင်ပိုင်းမှာ မိန်းမဆောင်း အဖြစ် အသုံးများနေတဲ့ ဒီ “ထီး” ကို ယူလာခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်မှာ ၁၃ နှစ်လောက် အသုံးပြုခဲ့ရာကနေစလို့ “ထီး” ဟာ ယောက်ျားတွေ အသုံးပြုဖို့ အကျုံးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ အချို့သော အင်္ဂလန် လူကြီးများဟာ သူတို့ရဲ့ ထီးတွေကို “Hanway” ဆိုပြီးတောင် သုံးနှုန်းလေ့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ထီးဆိုင်
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံး ထီးတွေကို စတင် ရောင်းချခဲ့တဲ့ ဆိုင်ကတော့ “James Smith and Sons” (ဂျိမ်းစ် စမစ်နှင့် သားများ) ဆိုင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ 1830 ခုနှစ်မှာ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အခုထိတိုင်အောင် ရှိပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ လိပ်စာ ကတော့ … 53 New Oxford Street in London, England ဖြစ်ပြီး Website လိပ်စာ ကတော့ … http://www.james-smith.co.uk/ ဖြစ်ပါတယ်
This entry was posted in Blog and tagged ဗဟုသုတ, ဘာသာပြန်. Bookmark the permalink.
← လွမ်းသူရင်မှာ …	အတိတ်က အပိုင်းအစ – ၁ →